Uthotho lweNetflix yeNursun luza kubetha eqongeni ngoNovemba 17 | Iindaba zeGajethi
Nokuba ungabalandeli beMarvel comics, andikho ngokukodwa, kufuneka kuqatshelwe ukuba ezinye zoluhlu lwenziwa nguNetflix kwindalo iphela zilungile, ngakumbi iDaredevil. Njengoko ixesha lesibini likaDaredevil liqhubela phambili, uninzi lwabalandeli beMarvel comics ngubani Bafuna ukuba iNetflix yenze uthotho olunikezelwe kwiPunisher, Indima eyadlalwa kolu thotho nguJoh Bernthal, umdlali ofanayo owayevela kumaxesha okuqala e-Dead Walking. Njengoko besesisele sazi, iNetflix yeza kusebenza ukwenza uthotho olunikezelwe kwiPunisher, uthotho oluza kufika kwiNetflix ngoNovemba 17.
Nangona kunjalo Ixesha lesibini lezinto ezingaqhelekanga yenye yezona zinto zilindelwe kakhulu, Abalandeli be-Superhero babelinde umhla wokuqala wale thotho intsha kwindalo emangalisayo apho siza kukwazi ukonwabela iPunisher ngokupheleleyo. Ukuba uqhelene nembali yePunisher ungonwabela i-trailer ngaphandle kwengxaki, kodwa ukuba akunjalo, ayicetyiswa ukuyibukela ukuze kuthintelwe uthotho lwabaphangi abanokonakalisa amava okonwabela olu thotho lutsha lweMarvel, ngalo mzuzu ujongeka umhle.
Nangona mva nje, INetflix ilayisha izahluko qho ngevekiNjengokuba kunjalo nge-Star Trek: ukufumanisa, kwithiyori iNetflix iceba ukulayisha uthotho olupheleleyo eqongeni, ukuze abalandeli beli qhawe likwazi ukuzinkcinkca kuthotho olupheleleyo kusuku olunye okanye ezimbini.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iDisney, umnini wamalungelo okumangaliswa, ibhengeze ukuba iyakwenza iqonga levidiyo Apho zonke iimovie onamalungelo akho ziya kufumaneka kuzo, ezinje ngeeNkwenkwezi zeMfazwe kunye neMarvel, ziyeke ukubakho kuwo onke amaqonga okusasaza. Nangona kunjalo, oku akuyi kuchaphazela iikhontrakthi ezazisayinwe ngaphambili neNetflix, ukuze sikwazi ukuqhubeka nokonwabela indalo iphela ngeNetflix ngaphandle kokuqesha inkonzo entsha yevidiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukusasaza » Uthotho lweNetflix yeNursun luza kubetha eqongeni nge-17 kaNovemba